नरिवलको तेल प्रयोगले बढेको पेट १५ दिन मै यसरी घटाउन सकिन्छ ,पढनुहोस » खबरहरुको एउटै केन्द्र
नरिवलको तेल प्रयोगले बढेको पेट १५ दिन मै यसरी घटाउन सकिन्छ ,पढनुहोस
आईतवार, बैशाख १६, २०७५ १३:२२ मा प्रकाशित !
एजेन्सी ,यदि तपाईं मोटोपनाका कारण चिन्तित हुनुहुन्छ र तौल कम गर्नका लागि सही तरिकाको खोजीमा हुनुहुन्छ भने एकपटक आफ्नो खाना बनाउने तेलमा पनि ध्यान दिनुहोस् । तपाईंको तेलले पनि तपाईंलाई मोटो बनाइरहेको हुनसक्छ । मोटोपनाबाट बच्न चाहनेले काँचो नरिवल तेल आफ्नो खानामा प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
हामीले खाने तेलमा धेरै मात्रामा फ्याट हुन्छ जुन शरिरमा जम्मा भएर मोटोपना बढाउने गर्दछ तर नरिवलको तेलमा बनेको खानामा फ्याटको मात्रा हुँदैन जसले तपाईंको तौललाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोग गर्दछ । नरिवलको तेल हरेक घरमा निकै सजिलोसँग उपलब्ध हुन्छ । यसमा बनेको खाना स्वादिष्ट पनि हुन्छ । नरिवरको तेल शरिरमा जम्मा नभई यसले ऊर्जावान् रहन सहयोग गर्ने विभिन्न अनुसन्धानले बताएको छ ।
कसरी कम गर्छ मोटोपना ?
यदि तपाईं नियमित रुपमा र सही तरिकाले काँचो नरिवल तेलको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एक महिनाभित्र तपाईंको तीन किलो तौल कम गर्न सकिन्छ । नरिवलको तेलले शरिर भित्र पुगेलगत्तै कोसिकालाई पोषण दिन सुरु गर्छ । यसले फ्याटलाई ऊर्जामा परिवर्तन गर्न सहयोग पुर्याउँछ । तपाईं दिनभरी जे खानुहुन्छ त्यसमा खराब फ्याट पनि हुन्छ जुन शरिरमा जम्मा भएर तौल बढ्ने गर्दछ । काँचो नरिवलको तेलमा पाइने ट्राइग्लिसराइड नामको फ्याट हाम्रो खानामा पाइने अन्य फ्याटभन्दा निकै गुणस्तरीय हुन्छ । काँचो नरिवलको तेलमा बनेको खाना खाँदा यो सिधा हाम्रो कलेजोमा पुगेर कोसिकामा फैलने गर्छ र फ्याटको कणलाई आफूतर्फ तान्ने गर्दछ । कोशिकामा पुगेर यो फ्याट कण तुरुन्त ऊर्जामा परिवर्तन हुन्छ ।
नरिवलको तेल पच्न सजिलो हुन्छ किनभने यसमा फ्याटी एसिडको मात्रा निकै कम हुन्छ । नरिवलको तेल मध्यम वर्गको ट्राइग्लिसराइड लोरिक एसिडबाट बनेको हुन्छ, यो एक आवश्यक फ्याटी एसिड हो । यसमा पाइने ट्राइग्लिसराइडले शरिरको मेटाबोलिजम बढाउँछ जसले फ्याटी एसिडलाई ऊर्जामा परिवर्तन गर्छ । हरेक दिन आफ्नो आहारमा नरिवलको तेललाई दुई देखि तीन चम्चा समावेश गर्नुहोस् ।
भोकलाई नियन्त्रण गर्छः
नरिवलको तेलबाट बनेको खाना खाँदा तपाईंलाई चाँडो भोक लाग्दैन । यसमा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ र क्यालोरी धेरै हुन्छ जसले भोकलाई नियन्त्रणमा राख्छ ।
बोसोलाई तीब्र रुपमा घटाउँछः
यदि तपाईंको लक्ष्य दैनिक रुपमा खाइने क्यालोरीलाई कम गर्नु हो भने नरिवलको तेल तपाईंका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसले शरिरको मेटाबोलिजमलाई दुरुस्त राख्छ । यो प्रक्रियामार्फत शरिरले खानालाई पचाउन, पोषक तत्वलाई अवशोषित गर्न, भोकलाई घटाउन र पाचन क्रियामा सुधार ल्याउन मद्दत गर्दछ ।
हर्मोनलाई सन्तुलनमा राख्छः
हर्मोन असन्तुलन भएका मानिसहरुमा तौल बढ्ने समस्या अत्यधिक हुन्छ । नरिवलको तेलमा बनेको खाना खाँदा ब्लड सुगर नियन्त्रणमा रहन्छ । क्यान्डिडा एक प्रकारको यीस्ट हो जसले शरिरको तौल बढाउने गर्दछ । तर नरिवलको तेलको सेवनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यदि तपाईंलाई आफ्नो तौल कम गर्नु छ भने एक चम्चा नरिवलको तेलमा तातो पानी मिसाएर व्यायाम गर्नुपूर्व पिउनुहोस् ।
PREVIOUS POST Previous post: आतंकवादी सर्वोच्च नेता लादेनलाई मार्न सहयोग गर्ने एक पाकिस्तानी डाक्टरको जीबन खतरामा
NEXT POST Next post: फुल फुल्ने ३१२ प्रजातीका बनस्पती नेपालमा मात्र पाइन्छन
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, बैशाख १६, २०७५ १३:२२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, बैशाख १६, २०७५ १३:२२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, बैशाख १६, २०७५ १३:२२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, बैशाख १६, २०७५ १३:२२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, बैशाख १६, २०७५ १३:२२